EPL: Arsenal oo dubatay kooxda Bournemouth, xilli labo jeer uu shabaqa soo taabtay Alexis Sanchez… + SAWIRRO – Gool FM
(Bournemouth) 27 Nof 2016 – Kooxda Arsenal ayaa garaacday Bournemouth oo marti u ahayd kulan ka tirsan horyaalka Premier League, iyadoo Alexis Sanchez uu labo gool u dhaliyey Gunners.
Arsenal ayaa goolka la hore ee ciyaarta la timid 12’daqiiqo qeybtii koowaad waxaana u dhaliyey Alexis Sanchez, markii uu ka faa’iidaysatay qalad uu sameeyey difaaca kooxda Bournemouth ee Steve Cook, kaasoo kubbad baas ahayd oo uu u waday goolhayaha kooxdiisa uu ka gaabiyey, sidaasna ay lugta ugu gashay Sanchez, kaasoo shabaqa dhigay kulanka ayaana sidaa ku noqday 1-0 ay hoggaanka ciyaarta ku haysatay Gunners.
Kooxda Arsenal ayaa waxaa ka dhaawacmay 15’daqiiqo qeybta hore ee kulankan Mathieu Debuchy, kaasoo tababare Arsene Wenger uu ciyaarta ka saaray kuna bedelay Gabriel Paulista.
Kooxda AFC Bournemouth ayaa la timid goolka barbaraha ciyaarta, waxaana gool ku laad loo dhigay gool u bedelay 23’daqiiqo Callum Wilson, kaddib markii Nacho Monreal oo ka tirsan Arsenal uu rigoore ku galay Wilson oo ku jiray xerada ganaaxa Gunners kulanka ayaana sidaas ku noqday barbaro 1-1.
Dadiiqadihii dheeriga ahaa ee lagu kordhiyey dhammaadkii qeybti hore ee ciyaarta waxaa hal jeer biraha garaacay Alexis Sanchez, kaddib markii isagoo ku jira xerada ganaaxa uu karoos hagaagsan ka helay saaxiibkiisa Ozil, laakiin kulanka ayaa lagu kala nastay barbaro 1-1.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta Arsenal ayaa markale hoggaanka ciyaarta soo ceshatay markii ay heshay goolkeedii labaad ee kulankan 53’daqiiqo, waxaana madax ugu dhaliyey Theo Walcott kaddib karoos uu ka xerada ganaaxa kooxda Bournemouth dhexdeeda ka soo qaaday Nacho Monreal, kulanka ayaana sidaas ku noqday 2-1 ay gacan sare ku lahayd Gunners.
Arsenal ayaa markale shabaqa soo taabtay waxaana mar labaad u dhaliyey daqiiqadihii lagu daray dhammaadkii ciyaarta Alexis Sanchez, kaddib baas uu ka helay Olivier Giroud oo bedel ku yimid, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 3-1 oo ay ku adkaatay Gunners oo garoonkeeda joogta.
Arsenal ayaa sidaas ku fadhisa kaalinta 4-aad ee kala horreynta horyaalka Premier League, iyadoo 13 kulan oo ay ciyaartay haysata 28-dhibcood.
SERIE A: Genoa oo jihada ka lumisay Juventus...(Wiilka tababare Diego Simeone oo cashar u dhigay Marwada Duqda ah)+SAWIRRO
Ricardo Kaka oo shaaciyay inuu isaga tagi doono Orlando City, Halkee ayuu ku wajahanyahay?